के तपाईलाई चुरोट छोड्न गाह्रो भएको छ ? यस्ता तरिकाले सजिलै छाड्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस् – Samabeshi Khabar
के तपाईलाई चुरोट छोड्न गाह्रो भएको छ ? यस्ता तरिकाले सजिलै छाड्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस्
१ चैत्र २०७७, आईतवार १६:०१ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । चुरोट खानु भनेको हामीले मृत्युलाई चाडै डाक्नु हो । चुरोटले हाम्रो शरीरलाई धैरै असर पोको हुन्छ । यो सब थाहाँ हुदा हुदै पनि चुरोटमा लतनै बसेको हुन्छ । धेरैले चाहेर पनि चुरोटको सेवन छोड्न सकिरहेका हुँदैनन्। चुरोटको सेवन छोड्ने धेरै तरिकामध्ये आफूलाई लाग्ने एक तरिका अपनाउनु जरुरी हुन्छ । यसको लागि समय मिलाएर एउटा योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । जस्तैः चुरोटको परित्याग गर्ने कुनै एक दिन निश्चय गरी यसको सेवन पूर्णरुपमा बन्द गर्न सक्नुपर्छ।